Amụma: Azụmaahịa gị Ga-abụ E-azụmahịa Business | Martech Zone
You hụla nke anyị ọhụrụ ulo oru? Ọ dị ezigbo ịtụnanya. Anyị na-arụ ọrụ na aghụghọ na mmepe nke mbipụta anyị maka ihe karịrị ọnwa 6 ma enweghị m ike ịgwa gị oge ole anyị nọrọ. Ihe iseokwu bụ naanị na anyị enweghị ike ịzụlite ngwa ngwa nke imecha ngwa ngwa. N'uche m, onye ọ bụla nke wetara isiokwu site na ncha taa na-arụ ọrụ adịghị mma na azụmaahịa ha na-arụ ọrụ.
Enwere m ike ịpụ ma nọrọ $ 59 na isiokwu magazin dijitalụ, wuru isiokwu ahaziri iche maka njikọta ọdịnala anyị, weghachite akara ngosi nke isiokwu ahụ, m wee na-arụ ọrụ n'ime izu. Anyị ka ga-ewepụta njikọta ọzọ, dị ka Podcast na ọba akwụkwọ White Paper, mana ọ ga-eju gị anya na ihe jiri isiokwu a mee.
Otu akụkụ nke dị mkpa bụ na ọ bịara WooCommerce zuru ezu ike. Woo, ya na isiokwu ya na igwe ahia ya, bu nso nso a nke Automattic zụtara - ụlọ ọrụ ndị nwere WordPress. N'uche m, m kwenyere na ọ bụ mkpebi dị mma. N'ihi gịnị? N'ihi na m na-ebu amụma na ụlọ ọrụ ọ bụla - ma ọ bụ B2B na B2C - ga-enwe akụkụ ụfọdụ nke ịhazi ọrụ onwe ha na-enye iwu site na weebụ.
Ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ecommerce abanyewo na ya. Otu egwu na-ada ụda na IRCE na Chicago bụ na ọ bụghị maka ire na ụlọ ahịa gị na saịtị gị. Ọ bụ maka ire site na ụlọ ahịa ndị ọzọ na saịtị ọ bụla. Obere ndị na-ere ahịa nwere sistemu eji arụ ọrụ, sistemụ ọdịnaya, yana sistemụ mmezu nke na-enye ha ohere ire gafee ọtụtụ ụlọ ahịa na ntanetị ma ewezuga nke ha.
Eziokwu bụ na ndị na-azụ ahịa (na azụmaahịa) na-atụkwasị obi na saịtị ha na-azụta. Ọ bụrụ na ị na-azụ ihe na Amazon ugboro ugboro, ị na-agaghị ịzụta Aftermarket n'ala ute si ụfọdụ Ihọd na Internet. Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ na isntanetị na-erekwa ụlọ ala ya na Amazon, ị ga-azụta ha.
Na-ama adịkwa ahịa online
Tupu ị gawa Chicago, enwetara m email site na Mba nile mkpuchi na ọ dị m mkpa ịkwụ ụgwọ ụgbọ ala m. Enwetara m akaụntụ m, ma ahụghị m ụzọ m ga-esi kwụọ ụgwọ ahụ. Alaghachiri m ọrụ ma chee na m ga-akpọ onye ọrụ m mgbe emechara. Couplebọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, anatara m ọkwa ọzọ na mkpuchi m ga-akwụsị ma ọ bụrụ na akwụghị m ụgwọ. Agara m wee nwaa ọzọ enweghị isi - enweghị m ike ịhụ kwụọ ụgwọ m bọtịnụ na ntanetị ọhụrụ ha dị ọcha. M setịpụrụ ihe ncheta ịkpọ onye nnọchi anya m.
N’echi ya, agara m ọrụ ma nwechara ọrụ ma anaghị akpọ onye ọrụ m. Mgbe m ruru ụlọ, o doro anya na enwere email na mkpuchi m ga-agwụ n'abalị ahụ n'etiti abalị n'ihi na akwụbeghị m ụgwọ m. Ọ bụghị ihe ọma… M na-akwọ ụgbọala Chicago na-esote ụbọchị m na-agaghị na-uninsured.
N'ihi ya, m tụgharịrị na ihe nchọgharị m na Geico. Mgbe nkeji ole na ole, enwetara m ezigbo oge na bọtịnụ mara mma ịzụta iwu ahụ. M pịrị bọtịnụ ahụ ma kwuo na ha ga-ezitere m akwụkwọ ụfọdụ site na mail ma ozugbo m mejupụtara ya, iwu m ga-adị ndụ. Have ga na-egwu egwu.
Na-esote - -enwe Ọganihu. Enyere m ozi m ma ha debe ozi gbasara ụgbọala m maka mụ na nwa m nwanyị. Ihe ole na ole gara aga emesịrị m nwee iwu ọhụụ na kaadị mkpuchi iji tinye n'ụgbọala m. O were ihe dị ka nkeji 10… m n’ezie mere chekwaa ego. Nke a juru m anya ebe ọ bụ na mụ na mba dị iche iche nọrọ ihe karịrị afọ 20.
Ndi mba nile tufuru m n'ihi mkpuchi ya? Mba, echeghị m mkpuchi ha na m masịrị onye ọrụ m. Ha tufuru m nanị n'ihi na enweghị m ike ijere onwe m ozi n'ịntanetị.
Ahia ahia gi na ahia m adighi iche. Ebe nrụọrụ ọhụrụ anyị nwere ike ịzụ ahịa zuru oke ma anyị ga-amalite ire ngwaahịa na ọrụ ndị na-eduga ndị na-agụ akwụkwọ anyị. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na nke a ga - abụrịrị mmụba na - eto eto na - eto eto maka anyị na - aga n'ihu na na ọrụ ụlọ ọrụ aka anyị na - enye ugbu a ọtụtụ ndị ahịa ga - eji nwayọọ nwayọọ belata.
Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ị na-egwu ahịhịa ma ọ bụ na-agba alụkwaghịm - dịka ndị mmadụ buru amụma na ụlọ ọrụ ọ bụla ga-abụ onye nkwusa, amụma m bụ na ụlọ ọrụ ọ bụla ga-enwe saịtị ecommerce ngwa ngwa karịa ka oge na-aga!
Tags: mkpuchi ụgbọ ala n'ịntanetịautomattice-azụmahịaecommercegeicoinsurancemba nilemkpuchi ịntanetịn'usoro ntanetịonline ụlọ ahịa-aga n'ihuwoowoocommerceWoothemes